परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू: जीवनमा प्रवेश | अंश ५३२ | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू: जीवनमा प्रवेश | अंश ५३२
पत्रुसले धेरै वर्षसम्म येशूलाई पछ्याए र उहाँमा धेरै कुराहरू देखे जुन अन्य मानिसहरूमा थिएनन्। एक वर्षसम्म उहाँलाई पछ्याएपछि, येशूले पत्रुसलाई बाह्र चेलाहरूमध्येबाट चुन्‍नुभयो। (अवश्य पनि येशूले यो कुरालाई उच्‍च स्वरमा बोल्‍नुभएन र अरूले यसबारेमा बिलकुलै थाहा पाएनन्।) जीवनमा, पत्रुसले आफूलाई येशूले गर्नुभएका हरेक कुराद्वारा मापन गरे। सबैभन्दा महत्वपूर्ण रूपमा, येशूले प्रचार गर्नुभएका सन्देशहरू तिनको हृदयमा गढेर बसे। तिनी सम्पूर्ण रूपले समर्पित र बफादार थिए, र तिनले उहाँविरुद्ध कहिल्यै कुनै पनि गुनासो व्यक्त गरेनन्। परिणामस्वरूप, तिनी येशू जानुहुने हरेक ठाउँमा उहाँको विश्‍वासयोग्य साथी बने। पत्रुसले येशूका शिक्षाहरू, उहाँका भद्र वचनहरू, उहाँले आफ्नो भोजनमा खानुहुने कुराहरू, उहाँका वस्त्रहरू, उहाँको आश्रय, र उहाँको यात्राको तौरतरिका अवलोकन गरे। तिनले सबै कुरामा येशूको अनुकरण गरे। तिनी कहिल्यै पनि स्व-धर्मी बनेनन्, बरु तिनले त पुराना भइसकेका सबै कुराहरूलाई फालिदिए, र वचन र कर्म दुवैमा येशूको उदाहरणलाई पछ्याए। यसै समयमा पत्रुसले स्वर्ग र पृथ्वी अनि सबै थोक सर्वशक्तिमान्‌को हातमा छन् र यही कारणले गर्दा तिनले आफूसँग कुनै व्यक्तिगत विकल्प छैन भन्‍ने अनुभूति गरे। पत्रुसले येशू जे हुनुहुन्थ्यो त्यो सबै आफूमा समाहित गरे र त्यसलाई एक उदाहरणको रूपमा प्रयोग गरे। येशूको जीवनले उहाँले गर्नुभएका काम-कुराहरूमा स्व-धर्मी हुनुहुन्नथ्यो भन्ने देखाउँछ; उहाँले आफ्नै बारेमा ठूलाठूला कुरा गर्नुको साटो मानिसहरूलाई प्रेमद्वारा प्रेरणा दिनुहुन्थ्यो। विविध काम-कुराहरूले येशू जे हुनुहुन्थ्यो त्यो देखायो, र यही कारणले गर्दा, पत्रुसले उहाँसम्बन्धी हरेक कुराहरू अनुसरण गरे। पत्रुसलाई आफ्ना अनुभवहरूले येशूको प्रमिलोपनको झन्-झन् बढी बोध गराए, र तिनले यस्ता कुराहरू भने, “मैले सारा ब्रह्माण्डभरि सर्वशक्तिमान्‌लाई खोजेको छु, र मैले स्वर्गमा र पृथ्वीमा अनि सबै थोकमा अचम्मका कामहरू देखेको छु, यसरी मैले सर्वशक्तिमान्‌को प्रेमिलोपनको गहन बोध हासिल गरेको छु। तर, मेरो आफ्नै हृदयमा यति साँचो प्रेम कहिल्यै थिएन, र मैले सर्वशक्तिमान्‌को प्रेमिलोपनलाई आफ्नै आँखाले कहिल्यै देखेको थिइन। आज सर्वशक्तिमान्‌का नजरहरूमा, उहाँले मलाई निगाहको साथ हेर्नुभएको छ, र मैले बल्‍ल परमेश्‍वरको प्रेमिलोपन अनुभूति गरेको छु। मैले अन्त्यमा के पत्ता लगाएको छु भने, परमेश्‍वरले सबै थोक सृष्टि गर्नुभएको तथ्यले मात्र मानवजातिलाई उहाँलाई प्रेम गर्ने तुल्याउँदैन; मैले त मेरो दैनिक जीवनमा उहाँको असीमित प्रेमिलोपन भेटेको छु। कसरी यो अहिले तत्काल देख्न सकिने कुराहरूमा मात्र सीमित हुन सक्छ र?” समय बित्दै जाँदा, धेरै प्रेमिलो कुराहरू पत्रुसमा देखा पर्दै गए। तिनी येशूप्रति एकदमै आज्ञाकारी बने, र अवश्य नै, तिनले केही धक्का पनि खाए। जब येशूले तिनलाई विभिन्‍न स्थानहरूमा प्रचार गर्नको लागि लैजानुहुन्थ्यो, तब पत्रुसले आफूलाई सधैँ विनम्र तुल्याएर येशूका उपदेशहरू सुन्थे। वर्षौंसम्म येशूलाई पछ्याएको कारणले तिनी कहिल्यै पनि अहङ्कारी बनेनन्। येशूले उहाँ आउनुको कारण भनेको उहाँको काम सम्पन्न गर्नको खातिर क्रूसमा टाँगिनको लागि हो भनी भन्नुभएपछि पत्रुसले आफ्नो हृदयमा धेरै पटक पीडा अनुभूति गर्थे र एकान्तमा एकलै रुन्थे। तैपनि, अन्तमा त्यो “दुर्भाग्यपूर्ण” दिन आयो। येशू पक्राउ पर्नुभएपछि, पत्रुस माछा मार्ने आफ्नो डुङ्गामा गएर एकलै रोए र यसको लागि धेरै प्रार्थनाहरू गरे। तर तिनलाई आफ्नो हृदयमा यो परमेश्‍वर पिताको इच्छा हो र यसलाई कसैले पनि बदल्न सक्दैन भन्ने थाहा थियो। तिनी आफ्नो प्रेमको कारण पीडामै रहिरहे र तिनले आँखाभरि आँसु बोकिरहे। यो अवश्य पनि मानवीय कमजोरी हो। यसरी, जब तिनले येशूलाई क्रूसमा टाँगिँदैछ भन्ने थाहा पाए, तब तिनले येशूलाई सोधे, “तपाईंले संसार छाड्नुभएपछि, के तपाईं हामीमाझ हाम्रो रखवाली गर्न फर्कनुहुनेछ त? के हामी अझै पनि तपाईंलाई देख्न सक्‍नेछौं त?” यी वचनहरू एकदमै अज्ञानतापूर्ण र मानव धारणाहरूले भरिएको भए तापनि, येशूले पत्रुसको पीडाको तिक्तता बुझ्नुभयो, यसकारण उहाँको प्रेममार्फत पत्रुसको कमजोरीलाई वास्ता गर्नुभयो: “पत्रुस, मैले तँलाई प्रेम गरेको छु। के त्यो तँलाई थाहा छ? तैँले जे भन्छस् त्यसको पछाडि कुनै कारण नभएको भए तापनि, पिताले के प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ भने म ४० दिनमा मानिसहरूसमक्ष देखा पर्नेछु। के तँ मेरो आत्माले तिमीहरू सबैलाई बारम्बार अनुग्रह प्रदान गर्नेछ भनी विश्‍वास गर्दैनस् र?” पत्रुसले यसबाट केही सान्त्वना महसुस गरेको भए तापनि, तिनले अझै पनि एउटा कुरा छुटेको महसुस गरे, त्यसैले पुनरुत्थान हुनुभएपछि, येशू तिनीकहाँ पहिलोपल्ट खुला रूपमा देखा पर्नुभयो। तथापि, पत्रुसलाई निरन्तर आफ्ना धारणाहरूमा अल्झिनबाट रोक्नको लागि येशूले उहाँको लागि पत्रुसले तयार पारेको खर्चिलो खाना अस्वीकार गर्नुभयो र एकै निमेषमा बिलाउनुभयो। त्यस क्षणपछि, पत्रुसले अन्ततः प्रभु येशूको बारेमा गहन बुझाइ प्राप्त गरे र उहाँलाई अझ बढी प्रेम गरे। उहाँको पुनरुत्थानपश्चात, येशू बारम्बार पत्रुसकहाँ देखा पर्नुभयो। त्यो चालीस दिन बितेपछि र उहाँले स्वर्ग-आरोहण गर्नुभएपछि, उहाँ फेरि तीन पटक पत्रुसकहाँ देखा पर्नुभयो। हरेक देखा पराइ ठीक त्यो बेलामा हुन्थ्यो जुन बेलामा पवित्र आत्माको एउटा काम पूरा हुन लागेको हुन्थे अनि नयाँ कामको सुरुवात हुन लागेको हुन्थ्यो।
पत्रुसले जीवनभरि नै जीविकाको लागि माछा मार्ने काम गरे, तर त्योभन्दा पनि बढी तिनी प्रचार गर्नलाई जिए। आफ्ना पछिल्ला दिनहरूमा, तिनले पत्रुसका पहिलो र दोस्रो पत्रहरूका साथै तत्कालीन फिलाडेल्फियाको मण्डलीका लागि धेरै पत्रहरू लेखे। त्यो समयका मानिसहरू तिनीद्वारा गहन रूपमा प्रभावित भएका थिए। आफ्नै योग्यताको प्रयोग गरी मानिसहरूलाई प्रवचन सुनाउनुको सट्टा, तिनले तिनीहरूलाई जीवनको सुहाउँदो आपूर्ति प्रदान गरे। तिनले येशूले संसार छाड्नुअघि उहाँले दिनुभएका शिक्षाहरूलाई कहिल्यै भुलेनन्, र आफ्नो जीवनभरि नै तिनै शिक्षाहरूद्वारा प्रेरणा प्राप्त गरिरहे। येशूलाई पछ्याउँदाको समयमा, तिनले प्रभुको प्रेमको पैँचो मृत्युले तिर्ने र सबै काम-कुराहरूमा उहाँको उदाहरण अनुसरण गर्ने संकल्प लिए। येशूले यो कुरामा सहमति जनाउनुभयो, त्यसकारण पत्रुस ५३ वर्षको हुँदा (येशूले स्वर्ग-प्रस्थान गर्नुभएको २० वर्षन्दा पछि), तिनलाई तिनको आकांक्षा पूरा गर्न मद्दत गर्नको लागि येशू तिनीकहाँ देखा पर्नुभयो। त्यसपछिका सात वर्षहरूमा, पत्रुसले आफैलाई चिन्ने प्रयास गर्दै समय बिताए। ती सात वर्षहरूपछि एक दिन, तिनलाई उँधोमुन्टो पारी क्रूसमा टाँगियो, यसरी तिनको असाधारण जीवनको अन्त्य भयो।